Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 26/09/2020)
Ị nwere ike na-achọghị ikwere na ndị a bụ ọdachi pụrụ imere gị, ma mkpa ka ị na-akwadebe maka na o na ị, ma ọ bụ onye a hụrụ n'anya, ga-achọ ọgwụ na ntị mgbe n'ebe dị anya. Ma ọ bụ dị mfe dị ka chipping gị eze, spraining gị ụkwụ, agbadata na a fever ma ọ bụ na-enwe a nkụchi obi, -anara ọgwụgwọ gị mkpa nwere ike ịbụ na dị mfe dị ka ọ ga-abụ na United States.
Maka ozi ọzọ banyere njem mkpuchi ahụike na ihe mere ị ga-eche banyere ihe na-ọ, ahụ ndu nwere n'okpuru.
• Travel mkpuchi ahụike iche na ọkọlọtọ njem mkpuchi atumatu isi na ọ na-adịghị enye mkpuchi maka na-akwụ ụgwọ ndị metụtara cancellations, igbu oge ma ọ bụ interruptions.
• ndị a atumatu a na-enye mkpuchi maka ihe na-adịkarị na-ewere isi ọgwụ expenses. Ndị a gụnyere mberede ụlọ nleta, esi kpọpụ mmadụ nile ọrụ na njem akwụ ụgwọ niile metere iru kwesịrị ekwesị ọgwụ owuwu.